मंगलवार, असोज ६, २०७७
Tue, Sep 22, 2020 at 5:44pm
पर्सामा एक महिनाभित्र युरिया मल आउने #आहा खबर# भारत र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुने #आहा खबर# नोबेल शान्ति पुरस्कार समारोह संक्षिप्त कार्यक्रमबीच डिसेम्बरमै गर्ने तयारी #आहा खबर# काेराेना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ह्वात्तै घट्याे, मंगलबार दुई जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ६ सय ४७ जनामा कोरोना पुष्टि, एक जनाकाे मृत्यु #आहा खबर# मंगलबार देशभर १ हजार ३ सय ५६ काेराेना संक्रमित थपिए #आहा खबर# संवैधानिक निकायमा तत्काल पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देशन #आहा खबर# चुनाव चिन्ह 'गाई' छाड्नु परेपछि पिडामा कमल थापा #आहा खबर# सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण गर्ने सरकारकाे तयारी #आहा खबर# काठमाडाैं ल्याइयाे डा. गोविन्द केसीलाई, जटिल बन्दै स्वास्थ्य अवस्था #आहा खबर# बालुवाटारमा शुरु भयाे नेकपा सचिवालय बैठक #आहा खबर# दीपिका पादुकोणको नाम पनि मुछियो बलिउड ड्रग्स कनेक्सनमा #आहा खबर# त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेविसंघका तीन कार्यकर्ता पक्राउ #आहा खबर# एकता महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने राप्रपाको निर्णय, चुनाव चिन्ह हलो, झण्डामा गाई #आहा खबर# डा भोला रिजाल दम्पती काेराेना संक्रमणमुक्त #आहा खबर#
मंगलवार, असोज ६, २०७७ साल
काठमाडौं, ६ असाेज । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य ह्वात्तै घटेकाे छ । आज एकैदिन सुनकाे मूल्य प्रतिताेला १ हजार ७ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो सोमबारको भन्दा १७ सयले कम हो । यस्तै आज तेजावी सुनकाे मूल्य पनि घटेर प्रतिताेला ९५ हजार रूपैयाँ..
राँझा, ६ असोज । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा उत्साहजनक राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । कोरोना भाइरस महामारी सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका कारण गत आर्थिक वर्षमा राजश्व घाटा व्यहोरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलले चालु आवको साउन र भदौ महिनामा भने लक्ष्यभन्दा अधिक राजश्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको पहिलो महिनामा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रु एक..
काठमाडाैं, ५ असाेज । नेपाली बजारमा साेमबार सुनकाे मूल्य २सयरूपैयाँले बढेकाे छ । आज छापावाल सुनको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेर ९७ हजार २ सय कायम भएको छ। आइतबार छापावाला सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ९७ हजार रुपैयाँ कायम भएकाे थियाे । यस्तै आज तेजावी सुनकाे मूल्य पनि उकालाे लागेकाे छ। आइतबार तोलाको ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ ताेकीएकाे तेजावी सुनकाे मूल्य आज ९६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ..
काठमाडौं, ५ असोज । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको छ महिनापछि आन्तरिक उडान शुरु भएको छ । बन्दाबन्दी शुरु भएको गत चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म तथा त्यसयता जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण झण्डै छ महिना आन्तरिक उडान ठप्प भयो । सामान्य अवस्थाको २५ प्रतिशत मात्रै उडान गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको हो । एक सातापछि क्रमशः..
वीरगञ्ज, ५ असोज । भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा त्यसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगो मूल्यमा बेचिरहेका व्यवसायीलाई पर्सा प्रशासनले कारवाही थालेको छ । व्यवसायीहरुले प्याजको कृत्रिम अभाव देखाई बढी मूल्यमा बेच्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले त्यस्ता व्यापारीहरुकहाँ छापा मार्न थालेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । वीरगञ्ज बजार तरकारीको मुख्य मण्डी मानिएको मीना बजारका केही व्यापारीले प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी..
डोटी, ४ असोज । जिल्लामा पसलैपिच्छे एलपी ग्यासको फरक मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यहाँका ग्यास डिलरमा एक मूल्य तथा सबडिलरमा अर्को मूल्य लिई ग्यास बिक्री वितरण गरिन थालेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ । यसरी ग्यास पसलैपिच्छे फरक मूल्य लिइन थालेपछि उपभोक्ताहरु मारमा पर्न थालेका छन् । जिल्लाको दिपायल, सिलगढी, राजपुर तथा पिपल्ला बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रकम बढी..
काठमाडौं, २ असाेज । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य ४ सय रूपैयाँले बढेकाे छ । आज सुनको भाउ तोलाको ९७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजाे सुनको भाउ तोलाको ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ काराेबार भएकाे थियो । यस्तै हिजाे प्रतितोला ९६ हजार १ सय रूपियाँमा काराेबार भएकाे तेजावी सुनकाे मूल्य आज ९६ हजार ५ सय मा काराेकार भइरहेकाे छ..
काठमाडौं, २ भदाै । किंग्स कलेज र सिंगापुरस्थित मिट भेन्चर्सबीच सहकार्य भएको छ। उद्यमशीलताको क्षेत्रमा बृहत अनुभव एवं श्रोतयुक्त यी दुई संस्थाहरुले उद्यमशीलता एवं नवप्रवर्तनको अवधारणालाई राष्ट्रियमात्रै नभइ क्षेत्रीयस्तरमै कार्यान्वयन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले व्यापार तथा व्यवस्थापन पढाइ हुने किंग्स कलेज र मिट भेन्चर्सबीच सम्झाैता भएकाे जनाएकाे छ । ‘मिट भेन्चर्ससँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित भएकाे र सम्झौताले नेपाली स्टार्टअप तथा अधिक संख्याका उद्यमीहरुलाई..
इलाम, २ असोज । नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ठूलो हिस्सा बाहिर निर्यात गर्नुपरिरहेका बेला अब भने अलैँचीलाई स्वदेशमै प्रशोधन गरिने भएको छ । अब नेपालमा उत्पादित केही हिस्सा अलैँचीलाई आउँदो मङ्सिरबाट नेपालमै प्रशोधन गर्न सकिने छ । झापाको अर्जुनधारामा रु तीन करोड लागतमा प्रशोधन उद्योग निर्माण भइसकेको छ । उद्योगले अलैँचीलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेर खरीद गर्ने प्रावधान बनाएको छ । उद्योगका सञ्चालक..
काठमाडौं, १ असाेज । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य प्रतिताेला ९ सय रुपैयाँ घटेको छ । ताेलामा ९ सय रूपैयाँले घट्दै आज छापावाल सुनकाे मूल्य ९६ हजार ६ सय रूपैयाँ कायम भएकाे हाे । बुधबार ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनकाे मूल्य आज घटेर ९६ हजार ६ सय रूपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि ९ सय रुपैयाँ ओरालो..
काठमाडौं, २९ भदाै । साताको दोस्रो दिन साेमबार नेपाली बजामा सुनचाँदीको भाउ बढेकाे छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतिताेला ४ सय रूपैयाँले बढेकाे हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ आज छापावाल सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ९६ हजार ९सय रूपैयाँ कायम भएकाे छ । छापावाल सुनको मूल्य हिजो ९६ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भएकाे थियो। यस्तै, आज तेजाबी सुनको भाउ पनि हिजोभन्दा ४ सय रूपैयाँले बढेर ९६ हजार ४ सय रूपैयाँ..
काठमाडौं, २७ भदाै । विषाक्त रसायन भेटिएपछि औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न पाँच कम्पनीलाई स्यानिटाइजर उत्पादनमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको रसायनद्वारा निर्मित स्यानिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री भइरहेको पाइएको भन्दै विभागले उत्पादनमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । विभागले काठमाडौंका हाइजिन सोप एन्ड केमिकल, नेपाल कायाकल्प उद्योग, आधार केमिकल्स एन्ड फुड इन्डस्ट्री, सर्च केमकम हर्बल प्रोडक्ट र सूर्यमुखी हर्बल प्रोडक्टसले बजारमा..
बिहिवार, भाद्र २५, २०७७ साल
काठमाडौं, २५ भदाै । नेपाली बजारमा आज बिहीबार पनि पनि सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९६ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएकाे छ । बुधबार प्रतितोला ९६ हजार ४ सय रुपैयाँमा कोरोबार भएको छापावाल सुनकाे मूल्य आज प्रतितोला ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा काराेबार भएकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हाे। त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला..
बुधबार, भाद्र २४, २०७७ साल
काठमाडौं, २४ भदाै । नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य बिहीबार प्रतिताेला ६ सय रूपैयाँले बढेकाे छ । सुनको भाउ आज तोलाको ९६ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै आज तेजावी सुनकाे मूल्य ९५ हजार ९ सय रूपैयाँमा काराेकार भइरहेकाे छ । हिजाे मंगलबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९५ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएकाे थियो । यस्तै हिजाे..
मंगलवार, भाद्र २३, २०७७ साल
काठमाडाैं, २३ भदाै । नेपाली बजारमा मंगलबार पनि सुनकाे मूल्य घटेकाे छ । आज सुन प्रतिताेला ३ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे । सोमबारको तुलनामा रु ३ सयले घटेर ९५ हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै मंगलबार तेजावी सुनको मुल्य भने ९५ हजार ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै , चाँदीको मुल्यमा १० रुपैयाले घटेर प्रतितोला १ हजार..
काठमाडौं, २१ भदाै । नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य केही दिन यता ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ। शुक्रबार ९६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य तोलामा आइतबार तीन सय रुपैयाँले घटेर ९६ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा तीन सय रुपैयाँले घटेर ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार..
काठमाडाैं, २१ भदाै। चाैधरी ग्रुपका मालिक एवम् उद्योगी विनोद चौधरी कोरोनाकाे संक्रमणमुक्त भएका छन् । उनले ट्वीटरमार्फत आफू कोरोना संक्रमणमुक्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनले शनिबार बेलुका ट्विटरमार्फत १० दिनको आइसोलेसनपछि आफू संक्रमणमुक्त भएको जानकारी दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीलाई १२ भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमण पुष्टिलगत्तै उनी चिकित्सक सल्लाहअनुसार आइसोलेसनमा बसेको जानकारी गराएका थिए । pic.twitter.com/7dAAnxdAo0— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) September 5, 2020..
चितवन, २० भदाै । तीन हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ। पोल्ट्री राजधानीका रुपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको हो। एक हप्ताअघि प्रतिकेजी खुद्रा ४२० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले २०० रुपैयाँमा झरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि यतिखेर ५० भन्दा बढी जिल्लामा..
काठमाडौं, १९ भदाै । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तीन सातायताकै सस्तो भएको छ । बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुन तोलाको १ सय रुपैयाँ सस्तिएर ९६ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला ९५ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको..
बलेवा। यो वर्षको वर्षा मुस्ताङको स्याउका लागि बाधक बन्यो। बाढी र पहिराका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा झरेको पहिरो र भत्किएको सडकका कारण यो वर्ष समयमै मुस्ताङको स्याउ बजारमा आउन पाएन्। ढिलै भए पनि एक महिना खर्चेर सडक मर्मतको काम भएको छ। अहिले सामान्य साना सवारी बेनी–जोमसोम सडकमा चलिरहेका छन्। तर स्याउ सहज हिसाबले बजार आउने अवस्था भने अझै बनेको छैन। भदौको..
काठमाडौं, १८ भदाै । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउमा पुनः गिरावट आएको छ । गत मंगलबारदेखि घट्न थालेको सुनचाँदीको भाउ बिहीबार (आज) पनि घटेको हाे । बुधबारको तुलनामा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि छापावल सुन तोलाको ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । हिजो तोलाको ९७ हजार २ सय तोकिएको थियो । यस्तै तेजाबी सुन..
काठमाडौं, १७ भदाै । यो साता लगातार बढेकाे सुनको मूल्य आज भने एकै दिन १२ सयले घटेको छ । आज सुन १२ सयले घटेर ९७ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार सुन ९६ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो । आइतबार प्रतितोला तीन सयले बढेर ९७ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो। सोमबार पनि सुन..
मंगलवार, भाद्र १६, २०७७ साल
काठमाडाैं, १६ भदाै । नेपाली बजारमान मंगलबार सुनको मूल्य एकैदिन ९ सयले बढेकाे छ । आज सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ९ सयले बढेर ९८ हजार ४ सय रूपैयाँ कायम भएको हाे। सोमबार सुन प्रतितोला ९७ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि ३० रुपैयाँले बढेर आज १३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। सोमबार चाँदी १ हजार ३..
सोमबार, भाद्र १५, २०७७ साल
काठमाडौं, १५ भदाै। आज सुनको भाउ प्रतितोला ३ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९७ हजार ५ सय रुपैयाँमा आएको हाे । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९७ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आज चाँदी प्रतितोला १३ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९७ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको थियो..
काठमाडौं। कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम रोक्न उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा विपरित सञ्चालन भएको ‘होम डेलिभरी’ सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाइने भएको छ। विना सावधानी उक्त सेवा दिँदा मानिसको घरघरमा कोभिड–१९ को संक्रमण हुनसक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले उक्त सेवा रोकेपछि आज भएको बैठकले मापदण्ड बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सेवा दिँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तयार गर्न आजको बैठकले एक समिति..
रोल्पा, १३ भदाै। रोल्पा जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत कोइला क्षेत्रमा रहेको रोल्पा सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन घटाएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने उक्त उद्योगले पछिल्लो समय भने उद्योग क्षेत्र वरपर रहेको चुनढुुङ्गा लगायतका कच्चा पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । बुधबार इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले कच्चा पदार्थ बोक्दै आएका २० वटाभन्दा बढी टिप्पर नियन्त्रणमा लियो । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी..
काठमाडौं, १२ भदाै । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेकाे छ । सुनको भाउ आज तोलाको ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हाे । हिजो तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै हिजाे तेजावी सुन प्रति तोला ९७ हजार १ सय रूपियाँमा काराेकार भएको..
काठमाडौं । केही दिनयता घटिरहेको सुनको मूल्यमा आजपनि गिरावट आएको छ । आज छापावाल सुनको मूल्य ९६ हजार ८ सय निर्धारण गरिएको छ । सोमवार ९७ हजार ९ र मंगलवार प्रतितोला सुनको मूल्य ९७ हजार २ सय रहेको थियो । आज सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले कमि आएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९६..
काठमाडाैं, ९ भदाै । मंगलबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार २ सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९६ हजार ७ सय निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३२० रहेको महासंघले जनाएको छ..
आज पनि घट्याे सुनचाँदीको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
सोमबार, भाद्र ८, २०७७ साल
काठमाडौं, ८ भदाै । नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला ५ सयले घट्दै ९७ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि २५ रुपैयाँले घटेको छ । चाँदी आज १ हजार ३ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार पनि ४ सयले सुनको मूल्य घटेको थियो । गत हप्ता सुनमा..
Results 1753: You are at page 1 of 59
एकै घरका आठ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण